Global Voices teny Malagasy » Mankalaza ny andron’ny tanora ny firenena Afrika Atsimo ary mahatsiaro ny fahiny · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Jolay 2009 1:22 GMT 1	 · Mpanoratra Ismail Dhorat Nandika Koloina RAMASINANDRO
Sokajy: Afrika Atsimo, Fanoherana, Foko sy Fiaviana, Zon'olombelona
Ny 16 Jona, izay ankalazana ny andron’ny tanora eto Afrika Atsimo dia andro ahatsirovantsika ny fahiny. Tamin’ny 16 Jona 1976 no nitranga ny hetsika tao Soweto  noho ny faneren’ny lalana fa amin’ny fiteny Afrikaans  no fiteny hampianarana.
Ny marainan’ny 16 Jona 1976, mpianatra mainty hoditra anarivony no nidina an-dalambe niainga avy tao an-tsekoly ho eny amin’ny kianja Orlando ary hanao rodobe hanohitra ny fanerena ny rafi-pampianarana an-tsekoly ho amin’ny teny Afrikaans. Betsaka tamin’ ireo mpianatra tonga teny an-tsekoly io maraina io no tsy nahafantatra mialoha ny hisian’ny fihetsiketsehana nefa resy lahatra nandray anjara teny ihany koa.
Heverina fa teo anelanelan’ny 300 ka hatramin’ny 600 no isan’ireo olona namoy ny ainy nandritra ny fifandonana, fotoana nofaritana ho fiandohan'ny fanoherana ny rafitra fanavakavaham-bolokoditra.
Mijery todika  ny tantara ny mpanoratra ao amin’ny bolongana Redemption Time:
Betsaka no azoko tenenina mikasika io andro io, nefa ho feheziko amin’ny teboka vitsivitsy ny teniko. Amin'ny tantara rehetra, ny fitondrana mpanavakava-bolokoditra sy ny zavatra vitany teo amin’ny vahoaka sy ny tanora izay nofehezina teo ambaniny no hitoetra ho tantara ratsy indrindra eo amin’ny tantaran’ny zanak’olombelona. Noho izany dia mitondra fanajana lehibe ho an’ireo tanora izay niaina tamin'izany fotoana izany aho, izay niady tamin’ny herin’ny fanavakavaham-bolokoditra sy ny fanambaniana ny bantu sy ny baiko afrikana sadasada ny taona 1976. Ho tsaroana mandrakizay ary homena voninahitra eto amin’ity firenena ity I Hector Peeterson sy ireo izay niaraka taminy ka nijoro nitaky ny zon’izy ireo.
Ao amin’ny bolongana Platform 2, manoratra  mikasika ny fankalazana ny fikomiana tamin'ny 16 Jona sy ny mozika ho endrim-panoherana ny mpanoratra:
Ho fantatry ny tontolon’ny Hip-Hop fa zanaka lahy no nomena antsika ny andron’ny 16 Jona, araka ny tantaran’ny tontolo rap, mpanantalenta rap no teraka avy tao anatin’ny hetsika ara-politikan’I Afeni Shakur ary ho fantatry ny tontolo Mzansi fa nipetraka ny tantara io andron’ny taona 1976 io. Androm-pitahiana ny fahatsiarovana io andro io tsy amin'ny maha andron'ny tanora Afrikana tatsimo ihany fa amin'ny mahafanatika Hip-hop ihany koa. Ireo mozika henointsika amin'ny maha-fiovana lehibe azy no nahasahian'ireo tanora mpiady nitondra ny hatezerany ho eny an-dalambe. Antony hafa no notakian’izy ireo izay mahakasika ny tolona politika nataon'izy ireo nefa mitovy amin'ny fanirian’ireo tanora ankehitriny higoka fahafahana. Ekena hoe tsy dia mihetsika toy ireo tanoran’ny taona 76 isika saingy raha ny marina dia mitovy ny zava-notakiana, dia ny fahafahantsika, hita mazava be izany nandritra ny fotoam-pifidianana tamin'ny volana arily ka ny ankamaroan’ny tanora mihitsy no tonga nandatsa-bato. Tonga isika hiaro ny fahafahantsika, nifidy isika satria tiantsika ho henoina ny fijaliantsika sy ny tolona ataontsika. Avy teo tsy ela akory izay no niara-nandihy tamin'ny fankahalana vahiny, famonoana sy ny fidorohana zava-mahadomelina isika, dia noraisintska ho amin'ny lafiny tsara toy ny fikomina nataon’ny Hector Petersons nanohitra ny rafi-pampianarana Bantu ihany koa tamin'ny alalan'ny fandrotsaham-bato ny fikomiana nataontska.
Manoratra  i Fabulosity fa ny olana dia zavatra hafa ambonin’ny fampianarana ho amin’ny fiteny Afrikaans:
Tsy ny teny Afrikaans amin'ny maha-rafi-pampianarana Bantu manontolo izay nisiana fanavahana sekoly sy Anjerimanontolo, kojakoja tsizarizary, ny efitrano fianarana hipoka ary ny tsy fahampian'ny fiofanana ho an'ny mpampianatra loatra no nisian'ny adihevitra.
Miresaka  ny fiantraikan'ny fihetsiketsehana I Thando Tshangela:
Nahatratra ny faratampony ny vanimpotoanan’ny fihetsiketsehan’ny mpianatra sy ny tanora tamin'ny taona 1980 tany amin'ny tanànan’ireo mainty hoditra ary ny krizin'ny kolontsain'ny fianarana sy ny fampianarana teo amin'nympianatra dia lasa ho fanoherana ny fanavakavaham-bolokoditra teny an-dalambe. Ny tanjona? Hahatonga ny firenena tsy ho azo fehezina? Sy ny hahatanteraka ny fahafahana na dia lasa sorona aza ny fanabeazana. Ny velirano nentin’izy ireo? Fahafahana aloha vao ny fianarana?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/07/14/2600/
 ny hetsika tao Soweto: http://en.wikipedia.org/wiki/Soweto_uprising
 Mijery todika: http://bikosghost.blat.co.za/2009/06/15/youth-day-let-us-reflect/